shop.com.mm ကနေပြီး Diaper တွေကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့
shop.com.mm ကနေပြီး Diaper တွေကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့လျှော့ချပေးနေပါပြီ0336
ကလေးငယ်လေးတွေ Diaper ဝတ်တဲ့အခါမှာ သန့်သန့်လေးဖြစ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိဖို့က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Diaperဝတ်တာကြောင့် ယားယံတာမျိုးအပူမိတာမျိုး လည်းမဖြစ်အောင် အမြဲသတိထားရပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတွေက တနေ့မှာDiaper ၁၀ကြိမ်လဲရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ တခါတလေကျရင်တနေကုန်ဘာမှမလုပ်ဘဲ Diaperချည်းထိုင်လဲနေရသလိုမျိုးတောင် ခံစားမိကောင်းခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေ ကိုင်တွယ်ပြီးလုပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကလေးငယ်တွေDiaperများများမလဲလှယ်ရလေ ကလေးငယ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ တခြားသောရောဂါပိုးမွှား ဝင်ရောက်နိုင်ခြေများလေမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေအတွက်လိုအပ်တာတွေ ဝယ်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကသိပ်ကိုကြီးမားပါတယ်။ တခါတလေမှန်းထားတာတောင်ကုန်ကျတက်ပါသေးတယ်။ဒီတော့ ကလေးအသုံးစရိတ်ကိုတက်နိုင်သမျှ ဂရုတစိုက်သုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သတင်းကောင်းတခုက shop.com.mm ကနေပြီး “Diaper Week” ကို February လ ၁၅ ရက်ကနေ ၂၈ ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းဘာတွေရနိုင်သလဲဆိုတော့ 40% ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ဈေး နောက်ပြီး ပို့ခအခမဲ့ ဆိုတာမျိုးတွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ လျှော့ဈေးတွေကိုအောက်မှာ ဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။
iBOBOကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ နူးညံ့တဲ့ခါးစည်းက Diaperကို ကလေးရဲ့ဗိုက်လေးပေါ်မှာနာကျင်မှမရှိဘဲကွက်တိလေးရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကိုသက်တောင့်သက်သာ အပေးနိုင်ဆုံးနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ၁၅မိနစ်တခါ Diaper ကိုတည့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ iBOBO ကနေပြီး 40% ရာခိုင်နှုန်း တောင်လျှော့ပေးပါတယ်။
Offer – 40 % on any items.
ကလေးငယ်ကို တိမ်သားတိမ်လွှာတွေလိုမျိုးထင်ရလောက်အောင် နူးညံ့မှုအပေးနိုင်ဆုံးကတော့ Genki Diaperဖြစ်ပါတယ်။ကလေးပေါ်မှာနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ လွတ်လပ်မှုကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Genki ကတော့ 20% ရှိပါတယ်။
Offer – 20% off on any items.
Huggies ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကလေးတွေကို အိအိစက်စက်နဲ့စိတ်အေးချမ်းမြေ့မှု ကိုပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Diaper ဝတ်ရတဲ့အတွက်စိတ်ရှုပ်မှုမဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Diaperလဲရတာကို လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်အောင်လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ အကြိုက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ ခါးစည်းက ကလေးကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။30 % ကနေ15% ထိတောင်ရှိပါတယ်။
Offer – 30% to 15% on any items.
Mamy Poko ဘောင်းဘီတွေရဲ့Double Leakစနစ်က Leakလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တနေကုန် ယိုစိမ့်မှုလုံးဝမဖြစ်အောင်နဲ့ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့လေးဖြစ်နေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၅၀၀၀၀ကျပ်ဖိုးဝယ်ပြီးရင် စက်ဘီးလေးတစီးလက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
Offer – Bicycle in purchase of 50,000ks
အိပ်ရာပေါ်မှာလူးလူးလွန်လွန့်လုပ်တက်တဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်အလွန်ကိုမှ သင့်တော်တဲ့ Diaperဖြစ်ပါတယ်။ကလေးပေါ်မှာစွဲစွဲမြဲမြဲ ရှိနေပြီးတော့ ယိုစိမ့်မှုလည်းလုံးဝမရှိအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။၂၀၀၀၀ဖိုးဝယ်သူတိုင်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရုပ်လေးတွေပါတဲ့ ခုံလေးလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Offer – Get baby seat with purchase of 20,000 ks.
နူးညံ့တဲ့အသားက ကလေးငယ်လေးတွေကို ယားယံမှုမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကလေးရဲ့နူးညံ့တဲ့အသားအရေကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင် လုပ်ပေးတဲ့အပြင်အစိုဓာတ်ကိုလည်း လုံးဝထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။သူကတော့ Diaper လေးတိုင်းကို 10 %နှုန်းလျှော့ဈေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Offer – 10% off on any items.
ညွန်းခဲ့တဲ့ Diapers တွေအကုန်လုံးက ကလေးငယ်တွေကိုလုံးဝအန္တရယ်မရှိစေပါဘူးနော်။ ဈေးနှုန်းသက်သာနေတဲ့အချိန်မှာ Cart ထဲကို စိတ်ကြိုက်ဖြည့်ပြီး offerရက်မကုန်ခင် အမြန်ဝယ်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
Previous Article7 Cute Gifts that will make your girlfriend Say, “Saranghae Oppa” on this Valentine’s DayNext ArticleNewsflash! Diapers Are Big Ol’ Sale at shop.com.mm Right Now